Cudurka Sunta ah ee loo yaqaan 'Amoxicillion Sodium' ee lagu mudo
Cuntada loo yaqaan 'Amoxicillion Sodium' ee loogu talagalay Mudista Isku-darka: Waxay ka kooban tahay hal garaam: Amoxicillin sodium 50mg. Daryeel xayeysiis 1g. Sharraxaadda: Amoxicillin waa kiniin shaybaar ballaaran oo dheecaan leh oo leh tallaabo bakteeriya oo ka dhan ah bakteeriyada Gram-positive iyo Gram-negative. Waxyaabaha kala duwan ee saamaynta waxaa ka mid ah Campylobacter, Clostridium, E. coli, Erysipelothrix, Haemophilus, Pasteurella, Salmonella, penicillinase-negative Staphtlococcus iyo Streptococcus spp. Ficillada bakteeriyada ay sabab u tahay xakameynta darbiga unugga ...
Loo yaqaan 'Procaine Benzylpenicillin' oo la xoojiyey
Qudaarta loo yaqaan 'Procaine Benzylpenicillin' ee Isku-darka isku-darka: Eeach vial wuxuu ka kooban yahay: Procaine penicillin bp ……………………… 3,000,000 iu Benzylpenicillin sodium bp ……………… 1,000,000 iu Tilmaanta: Budada nadiifka ah ee cad ama cad-cad. Ficil farmasiyada Penicillin waa antibiyootig-cufan oo muuqaal ah kaas oo ugu horayn ku sameeya bakteeriyada-gram-ka kala duwan iyo dhawr cocci-cocci. dareenka ugu weyn ...
Diminazene Aceturat iyo Phenazone Granules ee mudista ah
Diminazene Aceturate iyo Phenazone Powder ee loogu talagalay Mudista Isku-darka: Diminazene aceturate ……. lidka ku ah dhallaanka, piroplasmosis iyo trypanosomiasis. Tilmaamaha: Faafinta iyo daaweynta babesia, piroplasmosis iyo trypanosomiasis ee geel, lo ', bisadaha, eeyaha, riyaha, faraska, idaha iyo doofaarka. Ka hortagga uurka: Xasaasiyad u lahaanshaha diminazene ama phenazone. Maamulka ...
Ceftiofur Sodium ee duritaanka
Sodium Ceftiofur Si Loogu Muujiyo Cirbadaha: Waa caddaan ilaa budada huruudda ah. Tilmaamaha: badeecadani waa nooc ka hortaga dawooyinka lidka ku ah waxaana badanaa lagu isticmaalaa daaweynta cudurada ku dhaca shimbiraha iyo xayawaanka ay sababaan bakteeriyada xasaasiga ah. Digaagga waxaa loo isticmaalaa ka hortagga geerida hore ee ay keento 'escherichia coli'. Doofaarka waxaa loo isticmaalaa daaweynta cudurrada neef-mareenka (bakteeriyada bakteeriyada bakteeriyada) ee ay keento actinobacillus pleuropneumoniae, pasteurella multocida, salmonella c ...